Samuel Taylor Coleridge. Nhetembo nhatu dzekuzvarwa kwake | Zvazvino Zvinyorwa
Gumiguru 21 1772 akaberekwa Samuel Taylor Coleridge kuOttery St. Mary. Mudetembi wechiRungu, mutsoropodzi uye muzivi, aive mumwe wevatangi veRomanism MuEngland. Mamwe emabasa ake anozivikanwa ndeaya Kubla khan and the Bharadhi weOkare Sailor. Asi paiva nedzimwe nhetembo dzakawanda. Nhasi ndinonunura vatatu vavo kuti vayeuke.
2.2 Chando pakati pehusiku
2.3 Kuvapo kwerudo
Coleridge aive ne yakasimba dzidzo yepuraimari muchikoro chebhodhingi kubva kuLondon uye ndakazoenda kunodzidza ku University of Cambridge. Akange asiri mudzidzi akanaka, asi akarondedzera kune vadetembi vakakosha kubva kune hushamwari mabhuku ake ekutanga akauya: Kuwa kweRobespierre y Nhetembo dzakasiyana siyana.
Muna 1798, uye pamwe chete nyanduri mukuru William Wordsworth, akabatsira mukushanduka kweiyo Nguva yechiroma mune echirungu zvinyorwa neake kuburitswa pamwe kwe Lyrical ballads, basa rakaratidza iyo kutanga kweChirungu kudanana nguva. Pamusoro pehutano hwake, yake rudo rusingadzokwi naDorothy Wordsworth, hanzvadzi yeshamwari yake, agara achimuratidzira muchiratidzo chake cherudo.
Chimwe chaaifarira chaive Uzivi uye, inokwezva nemufananidzo we Kanto, akaenda kuGerman uko akasimbisa ruzivo rwake. Akanga achigarawo mukati Italia kwekanguva. Matambudziko mazhinji emunhu, kusanganisira wanano nezvirwere zvakaita se kufunganya uye kuora mwoyo, izvo zvakaita kuti ave akapindwa muropa neopium uye laudanum, vaienda naye kure nemhuri yake. Akapedzisira apotera kumba kweshamwari kwaakanyorera mamwe mabasa se Zvinyorwa biography o Sibylline mashizha. Akafira muLondon muna Chikunguru 1834.
Muzhinji, zvisinei, basa raColeridge zvinotidzosa munguva, zvinoita kuti tifambe kuenda kune isina chokwadi yakapfuura, uye kazhinji isingaitike, inova imwe yeakanyanya hunhu hweRomanism sebato rekunyora. Uye akagona sanganisa iyo yerudo uzivi nemamwe manyore evanhu uye kumhura.
Ini ndasangana nezvakaipisisa
Iyo yakaipisisa iyo nyika inogona kuumba
Izvo izvo zvakarukwa nehupenyu husina hanya,
Ndakafungisisa zvese, kubvarura
Mumoyo mangu kufarira hupenyu,
Kunyungudutswa uye kure netariro yangu,
Hapana chinosara izvozvi. Sei uchirarama ipapo?
Musungwa uyo, uyo anotapwa nenyika
Kupa vimbiso yekuti ndichiri mupenyu
Tariro yemukadzi iyeye, kutenda kwakachena
Mune rudo rwake rusingachinje, uyo akapemberera runyararo rwake mandiri
Nedzvinyiriro yerudo, ivo vaenda.
Vakaenda! Ini ndinofanira kutyora chibvumirano chisina mukurumbira,
Ichi chisungo cheropa chinondisunga kwandiri!
Mukunyarara ndinofanira kuzviita.
Chando pakati pehusiku
Iyo chando inozadzisa hofisi yayo yakavanzika
pasina rubatsiro rwemhepo. Zizi rinoputika
kuchema kwayo husiku -kunzwa- kukuru.
Wese munhu anozorora uye ndinozvipa kune izvo
kusurukirwa kunokurudzira kushushikana.
Iye anongova padyo neni, mubhedha rake,
kurara kwakadzikama kwemwanakomana wangu.
Kwakanyarara! Zvakawanda zvekuti zvinonzwisa tsitsi
iyo pfungwa ine yakanyanyisa uye isingawanzo
Nyarara. Gungwa, chikomo uye grove,
padyo neguta rino! Gungwa, chikomo nesango
nemaitiro ezuva nezuva ehupenyu,
isinganzwiki sekurota! Rimi rebhuruu
achiri kumba, haachatizve;
iyo chete tepi inokanganisa kudzikama,
ndichiri kubatidza pafenzi.
Kufamba-famba kwako mukudzikama kwechiitiko ichi
inopa kufanana nehupenyu hwangu,
inotora fomu ine hushamwari iyo
murazvo unopfuta unoita chinhu chekutambisa
yekufunga uye inodudzirwa
nenzira yayo yemweya, iyo inotsvaga
muzvinhu zvose girazi pacharo.
Uye mumaawa ane ruzha rwekufunga,
Pachine zevezeve risingaperi: ndinokuda;
Sole nyaradzo uye wega kutaura kwemoyo.
Makaumba tariro yangu, mukapfeka mukati mangu;
Kutungamira kurova kwangu kwese, kuyerera mukurwadziwa kwangu.
Iwe unorara mundangariro dzangu zhinji, sechiedza,
Kunge mwenje unotapira wemadekwani
Kana kutarisira kwezhizha kuputsa murukova,
Makore airatidzwa mudziva.
Uye kutarisa kumusoro kumatenga anokumonera,
Kazhinji, ndinorumbidza mwari akaita kuti ndikude seizvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Samuel Taylor Coleridge. Nhetembo nhatu dzekuzvarwa kwake